जहदा भेट्रानस गोल्डकप : कस्ले मार्ला बाजि ? - Nigranitimes
होमपेज / खेलकुद / जहदा भेट्रानस गोल्डकप : कस्ले मार्ला बाजि ?
जहदा भेट्रानस गोल्डकप : कस्ले मार्ला बाजि ?
आइतबार, मंसिर ०५, २०७८ , निगरानी टाइम्स
दिनेश सुब्बा लिम्बु
मंसिर ५ गते, जहदा, मोरङ । मोरङको कानेपोखरी—५, स्थित जहदाको रंगशालामा ‘जहदा भेट्रानस गोल्डकप’ प्रतियोगिताको फाइनल खेल आज हुने भएको छ । जहदा भेट्रानस गोल्डकप उपाधिको बाजि कस्ले मार्ला त ?
आज उपाधिको लागि आयोजक जहदा भेट्रानस एफसी र हाम्रो इटहरी भेट्रानस एफसी विच कडा प्रतिस्पर्धा हुदैछ । जहदा भेट्रानस गोल्डकपमा ४० बर्ष नागेका खेलाडीहरुले मात्र खेल खेलेका छन् । एउटा टिममा दुईजना ३८ बर्ष उमेर कटेको खेलाडी सहभागी गराउनु पाउने व्यवस्था गरेको छ । दुवै टिममा पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीले भरिभराउ छन् । उपाधिको लागि विजेता टिमले १ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाण–पत्र पाउने छन् भने उपविजेताले ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाण–पत्र हात पार्नेछ्न ।
हाम्रो इटहरी भेट्रानस एफसीमा पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीले भरिभराउ छन् । सुरेन्द्र तामाङ, लक्ष्मि चौधरी, दिवस राई, श्याम मानन्धर र तीर्थ याक्सो जस्ता पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीहरुले टिमलाई हाकेका छन् । उनिहरु जसरी हुन्छ उपाधि हात पार्ने दाउमा छन् ।
त्यसैगरी आयोजक जहदा भेट्रानस एफसीमा पनि पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीहरु उतिकै सहभागी छन् । नगेन्द्रमणी लिम्बु, भूपेन लिम्बु, सन्जीव बुढाथोकी, डेनिम राई, सन्तोष गाउँले, रमेश गुरुङ जस्ता पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीहरु र पूर्व खेलाडी चरण गुरुङले टिमलाई फाइनल सम्म पु्र्याएका छन् । होम ग्राउण्ड भएकोले आयोजक पनि उपाधि आफै राखेर इतिहास रच्ने दाउँमा छन् ।
हाम्रो इटहरी भेट्रानस एफसी ‘ए’ पोल बाट क्वाटर, सेमीफाइनल हुर्दै फाइनलमा पुगेको हो । हाम्रो इटहरी भेट्रानस एफसीले अभिषेक चर्च राझर नवलपरासीलाई २–३ गोल अन्तरले विजय हुर्दै हाम्रो इटहरी सेमीफाइनलमा पुगेको थियो । खेलमा हाम्रो इटहरीका लिलाराम मगर र सुरेन्द्र तामाङले एक एक गोल लगाएका थिए । त्यसैगरी सेमीफाइनल खेलमा हाम्रो धरान भेट्रानस एफसीलाई टाइब्रेकरमा २–३ गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको थियो । टाइब्रेकरमा पेनाल्टी सुटमा महेन्द्र खवास, दिपेन राई र रामशरण चौधरीले बललाई जाली चुमाएका थिए । त्यसैगरी खेलको निर्धारित समयमा दिपेन राईले २ गोल लगाएका थिए ।
आयोजक जहदा भेट्रानस एफसी ‘बि’ पोलबाट फाइनलको यात्र तय गरेका थिए । आयोजक जहदा भेट्रानस एफसीले सुरुको खेलमा मर्निङ भेट्रानस विराटनगरलाई शून्यको विरुद्ध २ गोलको अन्तरले पराजित गर्दै सेमीफाइनलमा पुगेको थियो । खेलमा जहदाका रमेश गुरुङ र नगेनमणी लिम्बुले एक एक गोल गरेका थिए । त्यसैगरी सेमिफाइनल खेलमा विर्तामोड भेट्रानस एफसीलाई १–४ गोलको अन्तरले विजय हुर्दै आयोजक जहदा फाइनलमा पुगेको थियो । जहदाका चरण गुरुङ, रमेश गुरुङ, नगेनमणी लिम्बु र बिष्णु सुनुवारले गोल लगाएका थिए ।
आज फाइनल खेलको समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेको उपस्थितमा हुने भएको छ । जहदा भेट्रानस क्लबको आयोजना र नव प्रगतीशिल समाज सेवा क्लबको संरक्षकमा आयोजना भएको हो ।